သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမူအကျင့် (၆) မျိုး - Lifestyle Myanmar
လူတစ်ယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်အသွင်အပြင် ပုံပန်းသဏ္ဏန်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ပြောချင်တာက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဝနေလို့၊ ပိန်နေလို့၊ ရုပ်ဆိုးနေလို့၊ စတိုလ်က ဂွမ်းနေလို့ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုအပြင်ပိုင်း ပုံပန်းသဏ္ဏန်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ သင့်ရဲ့အပြုအမှု၊ သင့်ရဲ့ပုံစံပေါ်မှုတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမယ့် အမှုအကျင့်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ပွင့်လင်းပါ၊ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ
ပွင့်လင်းပါဆိုတာ နေရာတိုင်းကို အကုန်လုံးလိုက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ၊ပြောပါမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – ပိုက်ဆံမချမ်းသာပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုး၊ အမှားလုပ်မိပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင် ဝန်မခံတာမျိုး ဒါတွေက သူများသိသွားရင်လည်း မကောင်းသလို သင့်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ပြောချင်တာက သင့်အရှိအရှိတိုင်း ပုံစံအစစ်အမှန်ကိုချပြပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေပါ။ အဲ့လိုနေခြင်းက လူတွေသင့်ကို ပိုလေးစားလာပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိလာမှာပါ။
သင်ပြောချင်တာကိုပဲပြောမယ် သူများပြောတာလည်း လက်သင့်မခံသလို သူများပြောတာလည်းနားမထောင်ပေးဘူး။ ဒါတွေက သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို အရမ်းလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူများနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ သင်ကလည်းပြော သူများပြောတာကိုလည်း သေချာနားထောင်ပေးပါ။
၃. ပြုံးပါ၊ ရယ်ပါ
အပြုံးလေးတွေက လူအချင်းချင်းကူးစက်သွားတဲ့ အရာပါ။ သင့်ရဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရယ်မောခြင်းနဲ့ အပြုံးလေးတွေက သင့်ကိုအများကြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် များများပြုံးရယ်ပါ။ အအောင်မြင်ဆုံးသူတွေက အပြုံးအများဆုံးသူတွေပါတဲ့။
Complains တွေ Reasons တွေ အရမ်းပေးတတ်တဲ့သူတွေ- ပြောရရင် တစ်ခုခုဆိုလုပ်တောင်မလုပ်ကြည့်ရသေးဘဲ လွယ်လွယ်ညဉ်းညူတယ်၊ အမြဲတမ်းလိုလို အကြောင်းပြချက်တွေရှိနေတဲ့သူတွေကို လူတွေက သဘောမကျကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်လုပ်စရာရှိတာဆို မညဉ်းညူဘဲ ပြေးလုပ်လိုက်တာ၊ တစ်ခုခုဆို Reasons တွေပေးနေမှာထက် အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားလုပ်လိုက်တာက သင့်ကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေမှာပါ။
၅. Eye Contact ရှိပါ
စကားပြောတဲ့အခါမှာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သင်ပြောနေတဲ့သူရဲ့ မျက်လုံးကို သေချာကြည့်ပြီးပြောပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက သင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့သူရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရသလို သင်ပြောတဲ့စကားကိုလည်း အလေးအနက်ထား နားထောင်စေမှာပါ။
၆. သင့်ကိုသင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါ။
‘ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်’လို့မယုံကြည်ထားရင် သူများရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို ဘယ်ရတော့မလဲနော်။ ဒီလိုယုံကြည်ထားတာကြောင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်ကအရင်ကထက် အများကြီးဆွဲဆောင်မှုပိုရှိလာမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်သင်လည်းယုံကြည်မှုတကယ်တိုးလာမှာပါ။
Source – theartofsimple